Wac oo talo weydii - InfoFinland
Warar ku saabsan Finland > Wac oo talo weydii
Boggan waxaad ka heleysaa lambaro telefoon oo aad wici karto islamarkaasna aad talo weydiin karto. Adeegyada telefoonadu waa adeegyada hay’ado dowladeed iyo ururo kala duduwan. Si kastaba ha ahaatee adeegga InfoFinland ma bixiyo talobixin mana ahan wax suuragal ah in InfoFinland la soo waco.
Macluumaad ku saabsan adeegyada bulshada
Macluumaadka ammaanka bulshada Finland
Talobixin dhinaca sharciga ah
Adeegyada shirkadleyda iyo shaqaalaha
Kaalmada dhibaatooyinka dhaqaale
Takoorka iyo cunsuriyadda
Talobixinta arrimaha caafimaadka la xiriira
Caawimaadda rabshad joojinta
Caawimaadda dhibanaha ka ganacsiga dadka
Ma u baahan tahay macluumaadka adeegyada bulshada ama caawimaadda isticmaalkooda? Waxaad talo weydiin kartaa talo-bixinta muwaadiniinta. Talo bixinta muwaadinku wuxuu kugu hayaa adeegga saxda ah, wuxuu kaa caawinayaa arrimo fulsashada elekterikaal ah wuxuuna kaaga jawaabaya adeegyada bulshada su’aalaha ku saabsan. Talobixinta muwaadinka laguma sameysan karo arrimaha saraakiisha, taas bedelkeeda waxay ku hagtaa dadka dhinaca saraakiisha.
Luqadaha adeeggu waa Finnish, Iswidish iyo Ingriis.
Wac: 0295 000
Telefoonka adeeggu wuxuu furanyahay
Isniin- Jimco 8–21
Nambarada adeegga Kelada
Arrimaha la xiriira ammaanka bulshada marka aad Finland u soo guurto ama aad dibadda u guureyso:
020 634 0200 (Finnish iyo Ingiriis)
Adeegga telefoonka ee Kela wuxuu furan yahay Isniin- Jimco saacadda 10-15.
Waxaa sidoo kale ballan telefoon ka qabsan kartaa Kelada. Ballanta waqtiga waxaad qabsan kartaa adigoo isticmaalaya adeegga telefoonka ama bogagga shabakadda ee Kelada. Marka aad qabsato ballanta waqtiga telefoonka talo-bixiyaha Kelada ayaa ku soo wacaya waqtiga lagu ballamay. Haddii aad turjubaan u baahantahay, sheeg marka aad ballanta qabsaneyso. Haddii aad turjubaan u baahan tahay, qabso waqtiga ballanta ugu yaraan todobaad kahor. Turjubaanada inta badan degdeg laguma helo. Kelada ayaa turjubaanka dalbeysa.
Pakolaisneuvonta waxaad ka heleysaa caawimo xaquuq iyo talooyin la xiriira magangelyo codsadayaasha iyo qaxootiga. Talobixinta waxaa lagu helayaa af finnish iyo ingiriis.
09 2313 9325 (Isniin- Jimco saacadda,10-12)
Talosiinta ajaanibta sharci laawayaasha ah: 045 2377 104 (Isniin kasta saacadda, 14-16).
Rikosuhripäivystys (Heeganka dhibanaha dembi)
Telefoonka caawinta 116 006
Telefoonka talobixinta qareenka 0800 161 177
Shaqada heeganka dhibanaha dembigu (RIKU) waa hagaajinta derajada dhibanaha dembiga, ehelkiisa iyo marqaatiga arrimaha dembiga. Waad wici kartaa heeganka dhibanaha dembiga haddii adiga ama ehelkaadu uu dhibane u noqdo dembi ama aad tahay marqaati dembi. Qasab kuguma ahan inaad sheegto magacaada marka aad soo waceyso. Kaalmo ayaad ka heleysaa telefoonka caawinta, horay ayaana laguu sii gudbinayaa haddii loo baahdo. Telefoonka talobixinta qareenka waxaad ka heleysaa macluumaad ku saabsan xuquuqda sharciyeed.
Adeegga shaqada iyo ganacsiga
La-talinta luqada finnishka ah: 0295 025 500
La-talinta luqada iswidishka ah: 0295 025 510
La-talinta luqada ingiriiska ah: 0295 020 713
Adeegga telefoonka waxaad ka heleysaa talooyinka adeegyada Xafiiska shaqada. Waxaad sidoo kale heleysaa hagis iyo talobixin la xiriirta arrimaha ogolaanshiyaha joogitaanka shaqaalaha.
Adeegga telefoonka: 0295 020 500
Adeegga telefoonka ee Shirkad-Finland waxaad ka heleysaa macluumaadka, hagista iyo talobixinta billaabista hawlaha ganacsiga iyo adeegyada ganacsiga ee guud.
Talobixinta canshuurista Finland oo luqada Ingiriiska ku baxeysa: 029 497 050
Canshuurta qofka ee caalamiga ah: 029 497 024
Adeegga canshuurta qofka ee caalamiga ah waxaad ka heleysaa macluumaadka canshuurta dakhliga dibadda kaaga soo gala iyo canshuurista shaqada dibadda iyo saameynta canshuurista marka dibadda loo guuro. Adeegga waxaa kale oo uu talo ka bixiyaa canshuurista dadka dibadda Finland uga imaanaya shaqo darteed iyo waajibaadka saaran canshuur bixiyayaasha marka lagu jiro xaaladaha caalamiga ah.
Velkalinja (Laynka deynta)
Talobixinta telefoonka: 0800 9 8009
Laynka deynta waxaa lacag la’aan looga soo wici karaa guud ahaan Finland, waxaadna sidoo kale welwelka lacageed ee naftaada ama ehelkaada uga sheekeysan kartaa magac la’aan. Dhibaatooyinku waxay ahaan karaan kuwa yar ama weyn. Wadasheekeysiga waxaa lagu ogaanayaa xaaladda soo wacaha waxaana lagu hagayaa islamarskaasna talo lagu siinayaa haddii loo baahdo in uu caawimaad raadsado.
Wakiiladda sinaanta u dooda
Telefoonka heeganka: 0295 666 817
Waad la xiriiri kartaa xafiiska Wakiiladda sinaanta u dooda, haddii aad takooris la kulantay ama aad dareemeyso in si cunsurinimo ah ama aan wannaagsaneyn laguula dhaqmay ajnabinimadaada ama asalkaada dartiis. Sarkaalka sare ee heeganka ah ayaa telefoonka kugu siinaya talo xal u helista la xiriirta wuxuuna kaala ballamayaa waxyaabaha kale ee suurtagalka ah in la sii sameeyo, si arrinta horay loogu sii gudbiyo.
Telefoonka waxaan kuugu adeegi karnaa luqada Finnishka, Iswidishka ama Ingiriiska.
Wakiilka isku qiimo ahaansha
Talobixinta telefoonka: 0295 666 842
Haddii aad ka shakiso in shaqo-bixiye, qeyb waxbarasho ama waax kale ay adiga ku takooreen jinsigaada dartiis ama sida kale ay jebiyeen sharciga isku qiimo ahaanshaha ee ragga iyo dumarka, waxaad wakiilka isku qiimo ahaanshaha weydiin kartaa hagis, jiheyn iyo caawimaad si arrinta xal looga gaaro ama cadeeyo. Wakiilka isku qiimo ahaanshaha waxaad sidoo kale ka heleysaa macluumaadyo kale oo ku saabsan sharciga isku qiimo ahaanshaha.
Väestöliitto (Hay’adda dadka)
Talobixin lacag la’aan ah oo loogu talagalay qoyska dalka u soo guuray ee la xiriirta su’aalaha wannaagsanaanta qoyska iyo koriinshaha carruurta. Talobixinta waxaa lagu bixiyaa luqado kala duduwan:
Kurdi (Sorani), Dari iyo Persia: 050 325 6450
Ruush iyo Ingiriis: 050 325 7173
QALBIGA Ururka caafimaadka dhimirka ee Finland
Telefoonka xasaradda ee afka finnishka: 09 2525 0111
Telefoonka xasaradda ee afka Carabiga: 09 2525 0113. Waxaad xittaa ku soo wici kartaa af Ingiriis.
Telefoonka xasaradda ee Uruka Qalbigu wuxuu u fidiyaa kaalmooyin wadasheekeysi oo toos ah dadka dhibka ama xasaradda ku jira iyo ehelkooda. Telefoonka waxaa ka jawaabaya shaqaale xasaradeed iyo mudawiciin la tababaray oo dadka kaalmeeya. Uma baahnid inaad magacaada sheegto marka aad soo waceyso. Telefoonka xasaradda waxaad ku sheegi kartaa dhacdooyinka degdega ah ama xaaladaha adag ee nolosha adigoo ku jira jawiga arrintaas kuu ogolaanaya islamarkaasna kaalmo leh.
Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma (Xarunta kaalmada Hilma ee naafada dadka dalka u soo guuray)
Telefoonka heeganka: 044 7577 099
Waxaad talooyin iyo hagis u heleysaa codsashada adeegyada sooshaalka iyo manfacyada loogu talagalay dadka naafada ah iyo buuxinta foomamka. Waxaad sidoo kale weydiin kartaa fursadaha baxnaano, waxbarasho, shaqo iyo hiwaayado. Adeegga telefoonku wuxuu ku baxaa Finnish, Iswidish, Ingiriis iyo Jarmal. Telefoonku wuxuu joogaa wax lamid ah qiimaha telefoonka caadiga ah.
Xarunta macluumaadka summowga 24h
Summowyada, daaweynta iyo ka hortagga: (09) 471 977
Xarunta macluumaadka summowga waxaad weydiin kartaa su’aalaha la xiriira ka hortagga summowga dedegga ah iyo daaweynta.
Nollalinja waa telefoon dadka caawiya oo aad wici karto haddii aad qoyskaada dhexdiisa kala kulanto dagaal, dagaalka galmo ama haddii adiga laguu hanjabo dagaal. Waxaad wakhti kasta Wici kartaa shaqaalaha adeegga, waxeyna ku hadlaan Finnish, Iswidhish iyo Ingiriis. Wicitaanka khadka eber waa lacag la’aan, wicitaanka kama dhalaneyso calaamad lagu qoro biilka telefoonka. Uma baahnid in aad magacaada sheegto marka aad soo wacdo. Khadka eber waxaa loogu talagalay dumarka iyo ragga.
Miehen Linja (Laynka ragga)
Telefoonka caawinta: (09) 276 62 899
Laynka raggu waa adeeg caawin oo loogu talagalay ragga dalka u soo guuray ee isticmaalay ama ka baqanaya inay isticmaalaan rabshad ka dhan ah lamaanahooda ama qoyskooda
Telefoonka heeganka: 0800 05058
Waxaan kaalmo iyo talooyin siinaa dumarka dalka u soo guuray ee rabshad ama dhib loo geystay ama halis ugu jira rabshad. Magacaada inaad sheegto uma baahnid marka aad soo waceyso.
Maria Akatemia (Akadeemoiyada Maria)
Khadka furan: 09 7562 2260
Kaalmooyin iyo caawimaadyo loogu talagalay dumarka isticmaala ama ka baqanaya inay isticmaalaan rabshad. Telefoonadu waa kuwa kalsooni leh. Khadka furan wuxuu ku adeegaa Finnish, Iswidish iyo Ingiriis.
Nidaamka caawinta qarameed ee Finland ee dhibbanayaasha ka ganacsiga dadka
Telefoonka caawinta: 02954 63177
La xiriir nidaamka caawinta dhibbanayaasha ka ganacsiga dadka, haddii aad dareento in lagu silciyay ama si xun laguu isticmaalay.
Waad heleysaa caawimaad, haddii
aad sharcidaro ku joogtay dalka
aadan heysan warqado aqoonsi ama baasaboor
adiga ama ehelkaada la handadayo
aad taqaano afkaada hooyo oo kali ah
qof kale uu deyn kugu leeyahay
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 17.05.2021 Boggan war-celin ka soo dir